Credit ကို အကြွေးဟုဆိုကြသူတွေ – မောင်မိုးညို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » Credit ကို အကြွေးဟုဆိုကြသူတွေ – မောင်မိုးညို
Credit ကို အကြွေးဟုဆိုကြသူတွေ – မောင်မိုးညို
Posted by kai on May 15, 2018 in Business & Economics, Contributor, Columnist |9comments
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များအတွင်းက လူမှုကွန်ယက်တွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ အမေရိကနိုင်ငံရောက်အခြေချနေထိုင်တဲ့ လူငယ် နှစ်ဦးရဲ့စကားပြော
ခန်းဗီဒီယိုဖိုင်တခုကိုအမှတ်မထင်ကြည့်ရှုမိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုအတိုချုပ် ပြောရရင်တော့ အမေရိကမှာ
ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ကြရတဲ့ဘ၀ဟာ အလွန်ကြမ်းတမ်း ကြောင်းဆိုတဲ့အ ချက်ပါဘဲ။ ဒါဟာငြင်းစရာမလိုတဲ့အချက်ဆိုတာကို စာဖတ်ပရိတ်နားလည်ထားပြီးသားပါ။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ဟုတ်တာတွေပြောနေတာဘဲလို့ယေဘူယျထင်စရာရှိစေမဲ့ စိုးရိမ်စရာ/အထင်လွဲစရာ သတင်း မှားဖြစ်နေတာမို့ မောင်မိုးညိုအနေနဲ့စိုးရိမ်မိရာက ဒီဆောင်းပါးရေးဖြစ်တာပါ။ သူတို့လေးတွေရဲ့ဆွေးနွေးချက် အကြောင်းရင်းခံကတော့၊ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘာဝယ်ဝယ်ဝယ်၊ ဘာသုံးသုံးအကြွေးတွေချည့်ပါဘဲဆိုပြီးငြီးတွားရင်း၊ “အကြွေး”စနစ်ကိုအပြစ်ပုံချကြတဲ့အကြောင်းပါ။ အထူးသဖြင့် ဗီဒီယိုပါဆယ်ကျော် သက်ရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်နေ တာမို့၊ ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူမြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာ၊ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆ၊ ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက် နေရာ ယူနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေ ၀မ်းနည်းဖွယ်တွေ့နေရပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတဲ့စကားဝိုင်းမှာ “အကြွေး”ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုအလေးထားပြောသွားတာ ကိုတွေ့ ရပါတယ်။ အမေရိကနိုင်ငံအပါအ၀င် တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးငယ်မဟူမှာ credit ဆိုတဲ့ စနစ်ကိုစတင် အသုံးပြုခဲ့၊ ပြုနေကြတာနှစ်ပရိစ္ဆေဒအတော်ကြာပါပြီ။ သမိုင်းနဲ့ချီပြောရရင်ပထမနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလထဲက ဒီအယူ အဆသစ် စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်းပါ။ စီးပွားပျက်ကပ်တွေကြောင့်လူ့ဘ၀ကနေနေ့ချင်းညချင်းဒုက္ခအတိရောက်ကြ သူတွေသိန်းသန်းနဲ့ချီတဲ့အဖြစ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့အစီအမံတွေကိုကြံစည်တီထွင်ရာကနေ၊ လူတိုင်းကြုံတွေ့ရ နိုင်ချေများတဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပျက်ပြုန်းမှု (financial crisis/bankruptcy) ကိုမျှဝေခုခံနိုင်မဲ့ (spreading of risk burden) အာမခံစနစ် (insurance) ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပါဘဲ။ အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာဘဲ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ရဲ့ ၀ယ်လိုအား (buying power) ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မဲ့ ငွေကြေးကြိုတင်သုံးစွဲခွင့် (loaning) ကိုဘဏ်တွေက စတင်ပြီး၊ ဈေးကွက်တွေမှာအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဘဏ်များရဲ့ရပ်တည်နိုင်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအသက်သွေး ကြောဟာ ငွေလည်ပါတ်မှု (everlasting cash flow)ပါ။ ဒီအတွက်ကိုယ့်ဘဏ်ရဲ့ငွေကိုကိုယ်စိတ်ချရသူတွေက၊ သုံးချင်လာအောင်စည်းရုံးဆွဲဆောင်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် “မိမိစိတ်ချရမဲ့” စားသုံးသူ (တနည်း)မိမိငွေကို သုံးစွဲမဲ့သူကသုံးချင်လာအောင်မက်လုံးအမျိုးမျိုးတီထွင်ပေးလာကြရပါတယ်။ “မိမိစိတ်ချရမဲ့” စားသုံးသူ လို့ဆို တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီငွေကိုပုံမှန်သုံးပြီး၊ ပုံမှန်ပြန်ဆပ်နိုင်မဲ့သူတွေများများပေါ်ပေါက်လာရေးဟာ၊ ဘဏ်များ အတွက် နောက်တဆင့်လိုအပ်တဲ့အခရာကျတဲ့အချက်ပါ။ ဒီကနေ့မှာ ပွိုင့်စနစ်နဲ့ငွေကြေး cash reward စနစ်၊ traveling point စနစ်စသဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ credit cards တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြမှာပါ။
ဆိုခဲ့တဲ့ ဘဏ်များရဲ့သက်ဇိုးရှည်ရေးကိစ္စမှာ“မိမိစိတ်ချရမဲ့” စားသုံးသူ ရရှိလာရေး၊ ပေါများလာရေးအတွက်၊ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ credit rating (score) system ကိုစတင်အသုံးခဲ့ကြတာဟာ၊ ခုဆိုရင် လူတိုင်း ဘ၀ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ Credit ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို “အကြွေး” လို့ဘယ်သူကဘယ်တုံးကတီထွင်လိုက်တယ်ဆိုတာအစရှာ မရဖြစ်နေပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက “အကြွေး”ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာ မြန်မာ့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့စီးပွားရေးနယ်ပါယ်မှာ “အကျဉ်ခံ”ဝေါဟာရအနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဓလေ့ဟာအရိုးစွဲနေပါတယ်။ “အကြွေး”ရှိသူတွေလူရာမ၀င်ဖြစ်ပြီး၊ အကူ အညီပေးချင်ကြသူတွေလက်တွန့်တဲ့အနေအထားပါ။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအရင်းအခြာဆွေမျိုးသားချင်းတွေ တောင် “အကြွေး”ရှိသူဆိုရင်မေးငေါ့ခံကြရယုံမက၊ လူရာအသွင်းမခံရပါဘူး။“အကြွေး” နဲ့ အမေရိကလူမှုစီးပွားဘ၀မှာမရှိမဖြစ်ရှိနေဘို့လိုတဲ့ credit လောကကြီးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတာ ကြာပါပြီ။ နီးစပ်ရာအချင်းချင်းလက်တို့ပြီး၊ “အကြွေး”မထားကြဘို့၊ “အကြွေး”မ၀ယ်ဘို့၊ တန်ရာတန်ဘိုးကိုအပြီး ပေးဝယ်ဘို့စတဲ့ စကား
တွေပလူပျံနေတာမတားနိုင်မဆီးနိုင်အောင်ပါဘဲ။ “အကြွေး”မ၀ယ်ဘဲ ငွေအပြည့်ပေးချေ ၀ယ်ယူရတာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကြသူ
တွေကိုလည်းမြင်ဘူးပါတယ်။ Credit card သုံးတာကိုရှုတ်ချကြသူတွေလဲဒုနဲ့ဒေးပါ။
ဒါတွေအားလုံးဟာကြီးမားလွန်းတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆကြီးတခုဖြစ်ယုံမက တဖက်သားရဲ့အနာဂါတ်ဘ၀ ကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၊ တိုက်တွန်းပြောဆိုကြသူတွေမသိကြလေရော့သလားလို့ စိုးရိမ် စိတ်ဝင်မိပါတယ်။ Credit ဟာ “အကြွေး” မဟုတ်ပါဘူး။ Credit ဟာ သက်ဆိုင်သူ (ရယူသုံးစွဲသူ) အတွက် ခံစားရတဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံနံမယ်ကောင်းတခုလို့ဆိုရရင်ပိုပြီးမှန်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ငွေကြို တင်သုံး စွဲခွင့်ပြုသူ(Debtor/borrower) ဘဏ် (lender/creditor/bank)၊ လုပ်ငန်း(သို့မဟုတ်)ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ငွေကြေးသတ်မှတ်ချက်တခုခုတို့ပါဝယ်တဲ့ (၃)ဦး(၃)ဖလှယ်အ၀န်းအ၀ိုက်ကြားမှာ(ဥပဒေအရ) ထားရှိတဲ့ “ယုံကြည်အပ်နှံမှု” (Trust) ပါ။ အဲ့ဒီ trust မှာပါဝင်ပြီး၊ တာဝန်ကြေအချိန်မှန်ငွေပြန်လည်ပေးသွင်း ခြင်းနည်းနဲ့ ရယူသုံးစွဲသူဟာငွေချေးငှားသူမဟုတ်တော့ဘဲ၊ credit ရရှိသူဖြစ်သွားပါတယ်။ Good Credit ရှိသူတွေမျက်နှာ ရှိကြပါတယ်။ ဘဏ်တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်ခြင်းခံကြရပါတယ်။ ဒီcredit ကောင်းမကောင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ်စိစစ်နေ တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပြီး၊ ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ credit rating ဟာ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီး တွေမှာနေထိုင်ကြသူ ဆင်းရဲချမ်း သာမရွေးတို့အတွက် အရေးပါအရာရောက်လှတဲ့ လူ့ဘ၀အစိတ်အပိုင်း တွေဖြစ်နေပါတယ်။ တမဟုတ်ခြင်းရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ –
(က) လူ့ဘ၀ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့၊ အိမ်/ခြံ၊ ကားဝယ်ယူရာမှာ ဘဏ်ငွေချေးရာတွင်လွယ်ကူခြင်း။
(ဂ) မိမိနှင့်တကွမိမိသားသမီးများရဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်ပညာသင်ကြားစရိတ်လျှောက်ထားရာတွင် နှင့်ဘဏ်ငွေချေးရာတွင်လည်းရရှိနိုင်မည်ူ့အခွင့် အလမ်းကောင်းခြင်း၊
(င) မိမိလိုအပ်မည့် Credit card အမျိုးစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ထားရှိသုံးစွဲခွင့်ရှိခြင်း၊ ယင်း ကတ်များက ပေးလာမည့်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးထူးများဖြစ်သော reward နှင့်အကျိုးအမြတ် ပွိုင့်များခံစားရရှိနိုင်ခြင်း၊
(စ) ကုန်ပစ္စည်း(သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင်၎င်း၊ တိုးချဲ့ရာတွင်၎င်း၊ မိမိလိုလားချက်ကို တိုးတက်တောင်းဆိုခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်အရေးဆိုခွင့်ရှိခြင်း၊
(ဆ) cell phones၊ Utilities ကဲ့သို့သော services များရရှိရန်လွယ်ကူခြင်း၊
Credit ဟူသောအရာသည် “အကြွေး” ဆိုသည့်မှားယွင်းသောအယူအဆကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းခ၀ါချပြီး၊ သူ တပါးကို
အလွယ်တကူလမ်းမှားသို့တွန်းပိုခြင်းများရပ်တန်းကရပ်ကြ၍၊ Credit ကိုကောင်းနိုင်သမျှ ကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော
မှတ်ချက်။ ။ မေလ ၂၀၁၈ မြန်မ့ာဂဇက်တွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်
AYA Bank က ကျနော့်ကို ယုံကြည်စွာနဲ့ ငွေတွေ
ကြို သုံးခွင့် ကတ် (credit card) ထုတ်ပေးထားတာ
ဘဏ်ထဲ အကောင့်လည်းမရှိ.. ပိုက်ဆံတပြားမှလည်း မထည့်ထားဖူးဆိုရင်တော့.. ဘဏ်ကယုံကြည်ရသူကြီးပေါ့..။
ကိုယ်က KBZ Bank user.
AYA bank မှာ credit card လျှောက်တော့
aya acc တစ်ခု ဖွင့်ရမယ် ဆိုလို့
ဒါမယ့် အဲ့ aya acc ထဲမှာ ငွေ1000MMK ပဲ ရှိ။
စုငွေတွေကို KBZ Accမှာ စုပြီး
သုံးတာကို AYA ကတ်နဲ့ သုံးတာ။
Credit cardနဲ့ သုံးထားသမျှက
မြန်မာပြည်ကို.. ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီတွေက ယုံမှာမဟုတ်..။
.. တိုင်းပြည်တွေမှာလည်း.. Credit Rating ယုံကြည်မှုအဆင့်.. ရှိပါတယ်..။
အမေရိကပြည်က.. AA+ ပါ..။ China က.. A+
ဆွစ်ဇာလန်ကတော့. AAA ပါတဲ့..။ မြန်မာပြည်ကတော့.. အမှတ်မရှိ။ စာရင်းမရှိ..ကီလီဘောတံတား..
ကိုရင်တို့ကဒ်တွေမှာ.. VISA, Master စသဖြင့်.. ခရက်ဒစ်ကဒ်လိုလို ထင်နေရတဲ့ကဒ်တွေက.. ဘဏ်က… စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမှာ တာဝန်ခံငွေတွေပုံထည့်ထားပြီး.. ကိုရင်တို့ကို သူကတာဝန်ခံ.. တဆင့်ပြန်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်..။
တနည်းအားဖြင့်.. သူ(ဘဏ်) ကိုယ်တိုင်က.. Credit History ယုံကြည်မှုစကိုးလ်ရအောင် ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့.. ယူဆပါကြောင်း..
အမှန်ပဲ..credit card ကို မွန်လေးသုံးတာ နှစ်ပေါက်တော့မယ် ခုဆို visa card ၁ကဒ်တောင်အဆစ်ရသေး..နိုင်ငံခြား
သွားရင်လည်းအဆင်ပြေတယ် ပြည်တွင်းတချို့ နေရာတွေမှာလည်းသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်…
ကျော်တို့ဆီက လူတွေက လွယ်လွယ်မှတ်ကြလို့ပါဗျာ။
ပညာရပ်ထဲ စီးပွါးရေးနဲ့ ဥပဒေရေးရာပညာတွေ မသင်ချင်ဆုံးပဲ။
သူတို့ အသုံးအနှုံးနဲ့ သူတို့ နားလည်တာနဲ့ ဟုတ်နေပေမဲ့
ကိုယ်တွေလို မနီးစပ်တဲ့ လူပြိန်း တွေ နားလည်တာ ဘာသာပြန်တာကျ တလွဲတွေ ဖြစ်ဖြစ်နေတာ။
ပြည်ပမရောက်သူလည်း ဗဟုသုတ များစွာ ရရှိပါတယ်ရှင့်။
ဘဏ်က ကြိုသုံးခွင့်ကို လျှောက်ထားခိုင်းပေမယ့် နှစ်စဉ်ဆောင်ခ ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်၍ မလုပ်မိပါကြောင်း..
ဘဏ်ထဲငွေကြိုထည့်ထားရင်လည်း.. ခရက်ဒစ်ကဒ်မဟုတ်..။ secured credit card ပေါ့..။
ကိုယ့်ရဲ့ ငွေပေး/ယူ Credit History ယုံကြည်မှုစကေး ကို စပြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်… အစမ်းထုတ်ပေးတာကိုခေါ်တာ..။
အမှန်ကရက်ဒစ်ကဒ်တွေကတော့.. နှစ်စဉ်ကြေးလည်း မရှိရ..။ သူ့ဖက်က ဘာမှတောင်းတာမရှိစေရ..။
အတင်းကို သုံးပါ.. သုံးပေးပါဆိုပြီး.. ထိုးပေးနေရကြတာဖြစ်ပါတယ.်.။
အပြိုင်အဆိုင်များလွန်းလို့.. အခုလိုခေတ်ဆို.. သုံးပေးတိုင်း.. Cash Back ငွေတွေပြန်ပေးနေကြရတဲ့ဘ၀..။
နှစ်စဉ်ကြေးယူထားကြတဲ့ ကဒ်တွေရှိရင်.. ခရက်ဒစ်နဲ့မဆိုင်.. အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ပဲ..။
ဥပမာ.. ဒေါ်လာငွေကြိုက်သလောက်သုံးလို့ရတဲ့.. Amex Black Card
ဒါကို FB မှာလည်းတင်ထားတာမို့.. သမိုင်းမှတ်တမ်းကျန်အောင်.. လင့်ခ်ပြန်ပေးပါတယ်..။